Misokatra ho an'ny fizahan-tany i Puerto Rico!
Home » Toerana fitsangatsanganana » Misokatra ho an'ny fizahan-tany i Puerto Rico!
Jereo i Puerto Rico dia manome toky ny besinimaro fa misokatra i Puerto Rico ary mandray mpitsidika taorian'ny horohorontany nandrava farany teo.
Ity no tokony ho fantatry ny mpandeha:
• Fandraisana ireo mpandeha sambo fitsangantsanganana an-tsambo: Omaly, nandray mpizahatany manodidina ny 15,000 avy amin'ny sambo fitsangantsanganana telo izahay Seranan-tsambo fitsangantsanganana any San Juan ao amin'ny Old San Juan.
• Powered Old San Juan: tafaverina amin'ny laoniny tanteraka ny fahefana ao Old San Juan ary misy ny fandrosoana manerana ny Nosy. Ny trano fandraisam-bahiny lehibe rehetra dia orinasa toy ny mahazatra (misy na tsy misy milina mpamokatra herinaratra).
• Ny sidina rehetra dia miasa toy ny mahazatra, ankoatry ny fitaterana hafa: Ny sidina rehetra dia miasa ara-dalàna mankany / avy amin'ny seranam-piaramanidina San Juan Luis Muñoz Marin, Ponce ary Aguadilla. Misy ihany koa ny safidy taxi sy ny fizarana fizarana. Ny serivisy Ferry mankany / avy any Vieques sy Culebra dia mandeha.
• Misokatra ny fisarihana: mitohy ny seranan-tsambon'i Ponce Cruise, ny Puerto Rico Convention Center, ary ny toerana manintona lehibe toa an'i El Morro, El Yunque, Fort San Cristobal, ary hotely manerana ny faritra avaratry Puerto Rico, anisan'izany ireo faritra rehetra manodidina an'i San Juan. misokatra ho an'ny orinasa. Ny torapasika, trano fisakafoanana, fisarihana, hotely ary mpamatsy serivisy manerana ny Nosy dia vonona hizara ny kolontsaina miavaka sy ny fandraisana vahiny mafana ao Puerto Rico amin'ireo mpandeha.
Ireo mpitsangatsangana miaraka amina drafitra ho avy dia tokony hanantona ireo mpamatsy fizahan-tany, hotely ary orinasa hafa. Manoro hevitra anay izahay mba hitsidika ny mpandeha DiscoverPuertoRico.com ho an'ny vaovao farany sy ny fanavaozana ny dia.
• Mahazo tohana ny faritra atsimo: ny mpitsangatsangana dia tsy tokony ho resin'ny toe-javatra maika. Ny governora Vázquez dia nitazona izany hatrany mba hanohizana ny fahazoana antoka fa ireo izay mila fanampiana amin'ny faritra atsimo dia mahazo famatsiam-bola sy fanohanana avy amin'ny governemanta. Trano hotely vitsivitsy amin'ny faritra atsimo no voakasik'izany. Toerana fizahan-tany roa (amin'ny isa marobe manerana ny Nosy), Punta Ventana any Guayanilla ary ny Ruins of the Lighthouse any Guánica, no nitatitra ny fahasimbana. Feno fankasitrahana izahay fa tsy nisy zava-mahatalanjona voajanahary hafa nanerana ny Nosy.
• Ho an'ireo izay te-hanampy: ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanampiana dia ny fitazonana ny drafitry ny dia na ny fitsidihana ny fitsidihana amin'ny taona ho avy. Ny toko Vokovoko Mena Amerikanina eo an-toerana dia manangona fanomezana ho an'ireo izay maniry ny hanome fanampiana an'ireo any amin'ny faritra atsimo.
Hafatra anatiny an'ny Boeing: jet 737 MAX 'noforonin'ireo mpitsabo'